Nicklos kay Oo Bogaadiyay Wajiga Labaad ee Shirka Cadaado. – SBC
Nicklos kay Oo Bogaadiyay Wajiga Labaad ee Shirka Cadaado.
Posted by SBC Editor on Juun 3, 2015 Comments
Wakiilka Qaramada Midoobay u qaabilsan dalka Soomaaliya Nicklos kay ayaa ka hadlay shirka maamul u samaynta gobalada dhexe waxa uuna soo dhaweeyay wajiga labaad ee shirka oo dhawaan ka fumay Magaalada Cadaado ee Gobalka Galgaduud.
Danjire Kay ayaa dadka goballada dhexe ku aamanay sida ay diyaarka ugu yihiin dhisida maamul ay yeeshaan goballada Mudug iyo Galgaduud iyo siday ula shaqaynayaan dowladda Federaalka Soomaaliya si shirku uu u noqdo mid mira dhala.
Mr Kay ayaa sidoo kale xusay in Qaramada Midoobay ay ka go’antahay tageerida Dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale dhisida Maamul gobaleedyada dalka si loo gaaro hiigsiga sanada 2016 ee la doonayo in dalka doorasho ay ka qabsooonto.
Wakiilka Qaramada Midoobay ee arrimaha Soomaaliya ayaa ugu dambayn xusay in beesha caalamka ay tageerayaan hananka federaalka Soomaaliya si soomaaliya ay uga soo kabsato dagaalada sokeeye ee 20-kii sano ee ugu dambaysay dalka ragaadiyay.
Hadalka Mr. Kay ayaa imaanaya xilli dhawaan Raysul wasaaraha Xukuumada Soomalaiya Cumar Cabdirshiid Cali sharmaarke uu furay wajiga labaad ee shirka la doonayo in maamul loogu yagleelo goballada Mudug iyo Galgaduud.